အဆိုပါ NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကမှတျတမျးတငျထား' ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - သတင်း Rule
အဆိုပါ NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကမှတျတမျးတငျထား’ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ (NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့) ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ဖုန်းပြောဆိုမှတျတမျးတငျထား, အက်ဒဝပ်စနိုးဒန်အားဖြင့်ပြန်လွတ်လာစာရွက်စာတမ်းများအရသိရသည်.
စနိုးဒန်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်များကိုကမ္ဘာတဝှမ်းအစိုးရများ၏ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်လူတိုင်းတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားကြပြီ. သူတို့သညျကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျ ပို. ပင်မိန်းမောတွေဝေသူတို့ဖုန်းများပေါ်တွင်စကားပြောသည့်အခါတိုင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်.
ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာမှပြန်လွတ်လာစာတမ်းများအတွက်ပြည်တွင်းရေး NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့စာရွက်စာတမ်းအိမ်ဖြူတော်မေးလျှင်, အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိပ်စာစာအုပ်နဲ့ Rolodexes ရဲ့ contents ဝေမျှဖို့ပင်တဂွန်.
အနည်းဆုံးအရာရှိတဦးကဒီကိုတှနျးလှနျနှင့် shared နိုင်ဘူး 200 အသေးစိတျ, ရာ 35 ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များပိုင်နှင့်ကိုတက်ခူးပြီး bug ကိုစာရင်းထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်. သူတို့ကအမည်ရှိသောကြသည်မဟုတ်, နှင့်၎င်းတို့၏အလှူရှင်အမည်မဖော်ဖြစ်ပါတယ်.
ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နှင့် ပတ်သက်. အမျက်တော်ပြန်ဖြစ်ဖို့ပြင်သစ်သမ္မတ Francois Hollande ဖုန်းဆက်, ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူကလည်းဂျာမန်အဓိပတိနှင့်အတူအမိန့်တော်ရှိ၏ Angela Merkel.
တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရဂျာမန် Spiegel သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Merkel သူမသည် NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့ရဲ့မမြင်ရတဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းပေါ်တွင်နာမည်တွေတယောက်ဖြစ်အံ့သောငှါစိုးရိမ်နေကြသည်, နှင့်သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်သူမကြောင့်မခံမရပ်မယ်လို့.
သူမ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Steffen Seibert ထိုသို့သောအမှုကိုအလိုလိုလားလားကြည့်ရှုအားပေးမဖြစ်မယ်လို့သတင်းစာကိုပြောခဲ့ပါတယ်.
“ဒီယုံကြည်မှုဟာသင်္ချိုင်းတွင်းကိုဖောက်ဖျက်လိမ့်မယ်. ဤသို့သောအလေ့အကျင့်ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ခံရမည်,” ဟုသူကပြောသည်.
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားသတင်းများအရအဆိုပါ NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့မစ္စမာကယ်အပေါ်ထဲမှာကိုနားထောငျကြောင်းတောင်းဆိုမှုများပယ်ချ, အနည်းဆုံးအားလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အတွက်. “နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစောင့်ကြည့်မနှင့်အဓိပတိမာကယ်၏ဆက်သွယ်ရေးစောင့်ကြည့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအဓိပတိစိတ်ချပါ,” Spiegel ဖို့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီများအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်.
ဥရောပကောင်စီလည်း NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့စောင့်ကြည့်အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်, အဲဒါကိုအဘို့အကြောင်းပြချက်တွေ့မြင်နိုင်သည်စဉ်သည်ဟုဆို, ဒါကြောင့်လည်းကညှဉ်းဆဲဆက်ဆံရေးကို prejudice နိုင်တွေ့မြင်နိုင်သည်.
“[ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲ] ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်း၏တန်ဖိုးအကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကိုမျဉ်းသား. သူတို့ဟာမိတ်ဖက်လေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံရမည်ဖြစ်သည်သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို, လြှို့ဝှကျန်ဆောင်မှု၏လုပျငနျးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဖြစ်အပါအဝင်,” တကယ့်လွတ်လာအစီရင်ခံစာ၏နောက်ဆုံးစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကပြောပါတယ် (PDF ဖိုင်ရယူရန်).
“သူတို့ဟာထောက်လှမ်းရေးစုရုံးအကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်အရေးပါသောဒြပ်စင်ကြောင်းအလေးပေး. ဒီဥရောပနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအားအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးသက်ဆိုင်. ယုံကြည်မှု၏အဖြေမရှိခြင်းထောက်လှမ်းရေးစုရုံး၏လယ်ပြင်တွင်လိုအပ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု prejudice နိုင်”. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, အဆိုပါ NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကမှတျတမျးတငျထား’ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, အဆိုပါ Inquirer မှစုစည်းတင်ဆက်သည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
16725	0 Angela Merkel, ဘားရက်အိုဘားမား, အက်ဒွပ်စနိုဒင်, Merkel, အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ, NSA အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့, Steffen Seibert, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← တာဝန်ရှိသူတဦးကနာမည်ရိုက်ချက်များအတွက်ဖမ်းသည်ဗြိတိသျှဘုရင်စနစ်၏အနာဂတ် တစ်ဦး Eco Friendly နေ့လည်စာ Make လုပ်နည်း →